MATIU 22 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 22)
Jisọs tụrụ ilu dị iche iche iji kọwaa ihe alaeze eluigwe yiri.
Ọ kpọkwara ọtụtụ ndị mmadụ ka ha bịa oriri ahụ. Mgbe ọ kwadosịrị ihe oriri, o zipụrụ ndị ozi ya ka ha gaa chetara ndị ahụ a kpọrọ ka ha bịa. Ma ha nile achọghị ịbịa.
Eze ahụ zipụkwara ndị ọzọ na-ejere ya ozi ka ha gaa gwa ndị ahụ a kpọrọ oriri sị, ‘E dozichaala ihe oriri ugbu a, egburu m oke ehi, na anụ ọzọ gbara abụba. Ihe nile dị na-eche unu, bịanụ ọsịịsọ.’
“Mgbe eze ahụ nụrụ ihe ha mere ndị ozi ya, o were iwe nke ukwuu, zipụ ndị agha ya ka ha gaa laa ndị ogbu mmadụ ahụ nꞌiyi, rechapụkwa obodo ha nꞌọkụ.
Ugbu a, gaanụ nꞌakụkụ ụzọ nile, kpọbatanụ ndị nile unu hụrụ, ka ha bịa nꞌoriri ọlụlụ nwụnye a.’
“Eze ahụ nyere ndị ozi ya iwu sị ha, ‘Keenụ nwoke a eriri, aka na ụkwụ, wepụkwanụ ya, gaa tụnye ya nꞌime ọchịchịrị, ebe ọ ga-anọ kwaa akwa, taakwa ikikere eze.
Nꞌihi na ọ bụ ezie na a kpọrọ ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ mmadụ ole na ole ka a na-ahọrọ.’ ”
Ugbu a anyị chọrọ ka ị gwa anyị, ò ziri ezi nꞌiwu ịtụ ụtụ nye Siza?”
Gosinụ m ego ụtụ unu.” Ha wetaara ya otu mkpụrụ ego.
Ọ jụrụ ha ajụjụ sị, “Ònye ka e sekwasịrị onyinyo ya nꞌelu ego a? Aha onye kwa dị nꞌokpuru onyinyo a?”
Ọsịsa Jisọs nyere ha juru ha anya nke ukwuu. Nꞌihi ya ha hapụrụ ya pụọ, jeere onwe ha.
‘Mụ onwe m bụ Chineke Eberaham, Chineke Aịzik, na Chineke Jekọb.’ Ihe okwu Chineke a na-egosi bụ na Chineke abụghị Chineke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ Chineke ndị dị ndụ.”
Mgbe igwe mmadụ ahụ nụrụ ihe Jisọs zara ha, ozizi ya juru ha anya.
Ma mgbe ndị Farisii nụrụ na Jisọs emeela ka ndị Sadusii mechie ọnụ ha, ha zukọtara ichepụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya.
Otu onye nꞌime ha bụ onye ozizi iwu bịara jụọ Jisọs ajụjụ iji nwaa ya sị,
“Onye ozizi, olee iwu kachasị mkpa nꞌime iwu nile Mosisi nyere anyị?”
Iwu ndị ọzọ nile na ihe nile ndị amụma chọrọ ka unu mee dabeere nꞌebe iwu abụọ ndị a dị.”
Mgbe ahụ ndị Farisii gbara ya gburugburu, Jisọs jụrụ ha ajụjụ sị,
“Gịnị ka unu na-eche banyere Onye nzọpụta ahụ? Nwa onye ka ọ bụ?” Ha zara sị ya, “Ọ bụ nwa Devidi.”
Ọ bụrụ na Devidi kpọrọ ya Onyenwe anyị, oleekwanụ otu o si bụrụkwa nwa ya?”
Ha amakwaghị ihe ha ga-asa ya. Sitekwa nꞌoge ahụ, ọ dịghị onye ọ bụla jụrụ ya ajụjụ ọzọ.